Imininingwane ku-Next Batman Villain; I-Arkham Knight - Isiko Lopop
Frosting Futhi Icing
Imininingwane ku-Next Batman Villain; I-Arkham Knight
Imininingwane emisha iveziwe ngalokhu okuzayo UBatman: U-Arkham Knight , okumangalisa kakhulu ukuthi i-Arkham Knight empeleni yigama lesikhohlakali esisha esenziwe yiDC Entertainment yalomdlalo. Abathuthukisi bathi le Knight entsha edolobheni izophonsela inselelo uBatman ukuthi ahambe naye ngekhanda ngezindlela eziningi ezahlukene.
abadlali abaphezulu be-basketball abangama-25 besikhathi sonke
U-Arkham Knight kuzoba yi-gen-gen kuphela futhi ngeke ixhaswe i-Xbox 360 noma i-PlayStation 3 ngoba abathuthukisi bazama ngempela ukucindezela imingcele yalokho okwenziwe kuze kube manje. Ibuye ithi imininingwane engaphakathi kwegeyimu yeBatmobile iyodwa ibingeke ilingane ku-Xbox 360 uma bekuyiyona kuphela into emdlalweni. Kuvezwe futhi ukubuya komlingisi wezwi likaBatman uKevin Conroy kanye nokubonakala kwezivakashi yibo bonke ababi bakho obathandayo.
Ama-villains alandelayo we-gen U-Arkham Knight: I-Two Face, i-Penguin (hlola uchungechunge!) Kanye ne-Harley Quinn engenakuqhathaniswa
U-Arkham Knight kuzokwenzeka endaweni entsha emaphakathi yeGotham City ehlukaniswe izingxenye ezintathu ezinkulu okuyenza icishe ibe kahlanu kunebalazwe Idolobha lase-Arkham.
Edolobheni laseGotham lapho kufe khona iJoker, kungenzeka ukuthi izinga lobugebengu lehlile kepha esikhaleni samandla abanye baya ngamandla. UBatman uzoba neBatmobile entsha ehluziwe ehlose ukufana negiya le-badass evela kumafilimu wakamuva futhi kunethuba elihle lokuthi uzosebenzisa amarokhethi amaningi wokudlala isikhathi, udabula izakhiwo kanye nokukhipha amandla ukushintshela ngokushesha ku-glide esheshayo. Futhi uBatman angashayela iBatmobile nganoma yisiphi isikhathi ngesikhathi somdlalo futhi izoginqika, ihlomile futhi ilungile.
Bheka i-trailer yomdlalo omusha ongezansi. UBatman: U-Arkham Knight kunamahemuhemu okuthi yehle ngo-Okthoba 14 we-Xbox One ne-PlayStation 4.
ulizinzisa kanjani ukhilimu ophehliwe
OKUSHIWO: Bheka! 'Batman: Arkham Knight', Isihloko Esilandelayo 'Batman' Esivela Emidlalweni YeRocksteady (Ividiyo)
OKUSHIWO: Umbiko: I-Retailer Drops 'Batman: Usuku Lokukhishwa luka-Arkham Knight'
OKUSHIWO: 'I-Batman: I-Arkham Origins' uMnu Freeze Tease (Ividiyo)
[ Nge- I-CVG ]
Umlayezo we-iphone ocisha ifoni
kungani isigayo esimnene ne-nicki minaj sehlukane
ungenza kanjani ama-donuts wekhekhe okuzenzela